Fampianarana – Page 6 – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
« MOA FANTATRAO VA IZAY VAKINAO? » (Asa 8:30) SAROPADY AMIN’NY FIANGONANA LOTERANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA Isan’ny antony mahatonga ny polipitra fitoriana Teny ho amin’ny toerana avo indrindra miohatra amin’ny zavatra hafa rehetra ao am-piangonana dia noho ny ny Teolojia Loterana izay mametraka ny Tenin’Andriamanitra ho ambony indrindra. Izy no fahefana ambony indrindra ary ny Teny irery ihany no afaka mamorona finoana […]
TENA TIAN’I JESOSY IANAO, ZANAKA MALALA, TSY FOINY FA SAROBIDY LOATRA AMINY « Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin’ i Jehovah Andriamanitrareo; Fa mamindra fo sy miantra Izy, mahari-po sady be famindrampo ary manenina ny amin’ ny loza » (Joela 2:13) Tsy tena mahadika ny teny Hebreo hoe LEV ny nandikan’ny Baiboly Malagasy azy hoe « FO ». Io tenyHeb […]
“Ny Fanahy Masina no mampianatra ahy fa tsy mila boky na mpampianatra hafa!” Misy fiangonana manana io fisainana io, fa tsy ilaina intsony ny fianarana Soratra Masina amin’olombelona, eny fa na dia ao amin’ny FLM aza rehefa mafana fo loatra sy tsy nahazo fampianarana ampy. Maninona no ilaina ny mianatra sy ampianarina na dia manana ny Fanahy Masina aza? Voalohany […]
MIBEBAHA FA EFA AKAIKY NY FANJAKAN’NY LANITRA Matio 4 : 17 Ity hafatra ity dia fitaoman’Andriamanitra anao mba hibebaka hiala amin’ny fahotana mba tsy hahatonga ny fiafaran’ny fiainanao ho very mandrakizay any amin’ny helo na ny afo be… Tian’Andriamanitra ho vonjena hianao mba handova ny Fiainana Mandrakizay any an-danitra. Ny zavatra tsara ho fantatrao manko dia izao: vao maty ny olona […]
Inona ny hoe mibebaka raha mitaha amin’ny hoe mifona ary ahoana ny fiainana ny famelan-keloka ? Ity resaka ity dia niainga amin’ny fanontaniana hoe ‘fahadisoana ve ny mandainga raha ho fiarovana ny hafa?’ napetraky ny mpikambana irao tao amin’ny ZFLM, kanefa ny fahamasinana sy ny fahamarinan’Andriamanitra tsy misy pentina, sy ny tokony ho fahatokisantsika Azy,indrindra fa raha mila mijoro amin’ny […]
Nahoana Jesosy Kristy no mbola natao batisa / Mitovy amin’ny batisan’i Jesosy ve ny batisan’ny Kristiana? Nafana ity adihevitra ity tao amin’ny ZFLM, ary nahitana fa tsy zanaky ny FLM avokoa akory ireo mpikambana ao; ary misy aza miezaka mitondra ny fampianarany eo amin’ny sehatra. Eto ndray dia tsy hivoaka ny foto-kevitra Loterana isika fa kosa hanazava izany mba hampiorina […]
FITIAVANA MARINA Fototra ara-tsoratra Masina iorenan’ny Fanambadiana (Fintina) Andriamanitra no nanorina ny fanambadiana: rehefa vitan’Atra ny famoronana izao tontolo izao sy izay rehetra teo aminy dia ny famoronana ny olombelona no faratampony tamin’ny asa nataony, ary nolazainy fa tsara izany. Hitan’Atra fa tsy natao ho irery ny olombelona ka nanamboarany vady sahaza ho azy (Gen 2:18-). Ny teny Heb hoe […]
Azo lazaina ve fa raha araka ny Gen 2:17 dia efa nisy tamin’ny faharian’Andriamanitra ny ratsy? Ireo valim-panotaniana voaray tao amin’ny pejy facebook ZFLM Mahaliana ity resaka ity satria raha io verset io no jerena dia tena efa teo amin’ny famoronana ny ratsy tamin’io fotoana nitenenan’Andriamanitra io. Ny teolojian’ny Genesisy dia ny hoe vokatry ny safidin’ny olona madiodio ny […]